US အနေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို အဲလ်ဘုံးလို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီ - YTV
Home » Blogs » US အနေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို အဲလ်ဘုံးလို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီ
US အနေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို အဲလ်ဘုံးလို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီ
Blogs September 29, 2020 7:33 am
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး ဗဟိုဌာနများက coronavirus သည် လူများ ရှူရှိုက်မိလျှင်ပင် ထုတ်လုပ်သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှတဆင့် အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် သေးငယ်သောအမှုန်များမှ တစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့နိုင်တယ်လို့ ၎င်းတို့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ air brones အဖြစ်နဲ့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်…..
COVID-19 ပိုးမွှားအပါအဝင် လေကြောင်းမှ ကူးစက်နိုင်သော ဗိုင်းရပ်စ်များသည် ကူးစက်ပျံ့နှံ့လွယ်ပြီး အလွယ်တကူ ကူးစက်စေနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…ယခင်က ကြေညာချက်တွေမှာ ဆိုရင်လည်း Covid-19 သည် အဓိကအားဖြင့် ၆ ပေခန့် နီးပါး ထိတွေ့မှုရှိသူများနှင့် ကူးစက်ခံရသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း သို့မဟုတ် စကားပြောတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အရာများမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
Covid-19 ရောဂါပိုးဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် အတူ အနီးကပ် ထိတွေ့နေကြတဲ့ ပြည်သူများအကြား ပြန့်နှံ့လွယ်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ မျက်ရည်စက်လေးတွေထုတ်လုပ်မှု ကဲ့သို့သော Aerosol သေးငယ်တဲ့အမှုန်မှတဆင့် ပြန့်ပွားနိုင်တယ်လို့ လူသိများလှတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
မျက်ခုံးများနှင့် လေထဲရှိအမှုန်များသည် လေထဲတွင် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ပြီး အခြားသူများမှ ပြန်လည်ရှူရှိုက်မိနိုင်ပြီး ၆ ပေကျော်သော အကွာအဝေးများ (ဥပမာ - အလေ့အကျင့်များပြုလုပ်စဉ်၊ စားသောက်ဆိုင်များ သို့မဟုတ် ကာယလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ) တွင် အများအပြား တိုးများလာနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ယေဘုယျအားဖြင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသော မိုးလုံလေလုံပတ်ဝန်းကျင်များသည် ဤအန္တရာယ်ကို ပိုမို ဖြစ်ပွားစေနိုင် ကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
ဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ အနေနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်တကွ အခြားသူများအား ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် (၆) ပေခန့်အကွာမှာ နေထိုင်ပြီး လူမှုရေးဆက်ဆံရေးကို အကွာအဝေးတစ်ခု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ အရာဝတ္ထုများကို သန့်ရှင်းနေစေရေးတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်……
ယခုအခါမှာလည်း ဆိုးရွားလှတဲ့ ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် "ဖြစ်နိုင်လျှင်အနည်းဆုံး ၆ ပေအကွာအဝေးမှဝေးဝေးနေပါ" လို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. မျက်နှာဖုံး (Mask) များ၀တ်ဆင်ရန်နှင့် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးများ ပိုးသတ်ဆေးများကို ပက်ဖြန်းနိုင်ကြဖို့ အတွက်လည်း ဆက်လက်ညွှန်ကြားနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ ရောဂါကို စတင်ခံစားနေရပြီလို့ သံသယရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ မိမိအိမ်တွင်းမှာ သီးခြားနေထိုင်ခြင်းက မိမိမှတစ်ဆင့် မကူးစက်နိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေကိုလည်း မကူးစက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
အခုဆိုရင် ဒီရောဂါပိုးဟာ လေမှတစ်ဆင့် ကူးစက်မှုက ပိုမိုမြင့်တက်လွန်းနေပြီး ဘယ်သူမှလည်း မမြင်နိုင်၊ မတွေ့နိုင်ဘဲ လေထဲက တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဗုံးတစ်လုံးလို့တောင် အဲလ်ဗုံးအဖြစ်နဲ့ သတ်မှတ်နေကြပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ ဒီရောဂါပိုးကြီးကို ကိုယ်တိုင်ကနေ စတင်ကာကွယ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကနေ ပျောက်ပျက်သွားအောင် အတူတူ တွန်းလှန်လိုက်ကြရအောင်နော်………